That's so good, right?: 2013
Posted by Alex Aung at 6:53 AM No comments:
Posted by Alex Aung at 8:57 PM No comments:
Posted by Alex Aung at 8:29 PM No comments:
နှင်းစက်လေးတွေ ခေါင်မိုးကို တစ်ဖျောက်ဖျောက်ထိခတ်နေသံ ကို ခပ်သဲ့သဲ့ကြားနေရသည်ပဲ။
ရာသီဥတုရဲ့အေးမြမှုတွေကြားမှာ ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်ရည် အေးစက်စွာ နွေးထွေးမှုကင်းမဲ့နေတာ ကျွန်တော့်စိတ်ရဲ့ ရူးသွပ်မှုတစ်ခု သက်သက်ပဲလား၊ 'အတွေးလွန်မှုလေးသာ'ဆိုတာများလား။
'လူဆိုတာ အချစ်နဲ့မကင်းဘူး တစ်ယောက်ယောက်နဲ့မင်း ချစ်တမ်းကစားလိုက်ရင် အေးစက်နေတဲ့ မင်းစိတ် ကိုယ်ခန္ဓာ အလိုလို နွေးထွေးသက်ဝင်လာမည်'တဲ့ ခင်သောသူငယ်ချင်းလေးကပြောပြပါရဲ့။
‘မင်းမသိလို့ပါ......ကိုယ်ဟာ ရင်ခုန်သံများစွာအောက်မှာ တစ်ကိုယ်ရည် အထီးကျန်နေတယ်....’
'ရာသီဥတုကအေးလိုက်တာနော်ချစ်၊ မင်းဒီလိုဆောင်းရာသီကို ကြိုက်လား၊ကိုယ်တော့ နွေဦးရာသီကို ပိုရင်ခုန်တယ်'
‘ဟင့်အင်ဗျာ.....ကျွန်တော်ဒီလိုဆောင်းဦးရာသီရဲ့အေးမြလတ်ဆတ်မှုကိုပိုသဘောကျတယ်' လို့ သူ့ကိုနှုတ်ကဖွင့် မပြောဖြစ် ပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ အမှန်တကယ် ဒီလိုဒီဇင်ဘာလရဲ့ ဆောင်းနှင်းပွင့်တွေကို သဘောကျပါတယ်။ ရာသီဥတုကအေးတယ် တစ်ယောက် တည်းနေတတ်သူတွေအတွက် သိပ်အဆင်မပြေဘူးလို့ ဆိုကြပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ရင်ခုန်သံလေးတွေအစီအရီဆိုတော့ နွေးထွေးရာရင်ခွင်က အသင့်။
သက်ပြင်းတစ်ချက်ကို လေးလေးကန်ကန်ချရင်း ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ရယ်ချင်သလိုလို အလန့်တကြားလိုလိုပင် ဖြစ်သွားမိသည်။ နောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီလောက်ထိန့်လန့်တုန်လှုပ်သွားရမှန်းကိုလည်း ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှ ပြန်တွေး ကြည့်လို့မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေမိ၏။
'ဘာကိုလည်း ဘာကိုထိတ်လန့်သွားသလဲ?'ဆိုရင် ကျွန်တော့် လက်ဖ၀ါးကို သူ့ရဲ့နွေးထွေးတဲ့လက်နဲ့ အုပ်မိုး ကိုင်တွယ် ရင်း 'Honey' လို့ခေါ်လိုက်သံကြောင့်ပေါ့။ သူ့ရင်ထဲကလာတဲ့ ဒီအသံဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ရင်ခုန်သံပြင်းထန်သွားစေသလို ထိန့်လန့်သွားစေခဲ့တာ လေအေးအေးလေးတွေတိုက်နေတဲ့ အင်းယားကန်ဘောင်က ဘူးသီးကြော်ဆိုင်လေးမှာပါ။
ဒီဇင်ဘာရဲ့ ခေါင်းလောင်းသံချိုလေးတွေကို သူ့တိုက်ခန်းလေးကနေကြားနေရပါတယ်။ ဒီလိုညချမ်းမှာ အိမ်တိုင်းလိုလို ဒါမှ မဟုတ် ရင်နှီးခင်မင်ရာမိတ်ဆွေတွေရဲ့ အိမ်တွေမှာ 'ကောင်းချီး မင်္ဂလာရောက်စေသော်' ဆိုတဲ့ သံစဉ်လေးတွေ ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကြားရတယ်။ သူလည်းအိမ်ကိုလာမည့် သူ့မိတ်ဆွေတွေ အတွက် စားစရာတွေပြင်ဆင်နေသလို ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အကြိုက်သံပုရာရည်လေး တွေဖျော်ရင်း ပြီးတော့ မကြိုက်သူတွေအတွက် ကော်ဖီရဖို့ ကော်ဖီကျိုတဲ့စက်လေး နဲ့ပြင်ဆင်ပေးရင် ကူညီပျော်ရွှင်ရပါတယ်။
ပျော်ရွှင်မြူးကြွနေတဲ့ သူ့ကိုကြည့်ရတာ ကျွန်တော်ပါရောယောင် ပျော်ရွှင်မိရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့တော့ဘာမှ မဆိုင်တဲ့ ရာသီ ဖြစ်ပေ မဲ့ ဂီတဆိုတဲ့ သံစဉ်တွေနောက်ကျွန်တော်နစ်မြောမိရပါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ သူ့သူငယ်ချင်းတွေက ကျွန်တော့်လက်ရာ သံပရာရည်ချိုချဉ် လေးရယ် ကော်ဖီလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေကို နှစ်သက်ချီးကျူးတော့ သူကဂုဏ်ယူစွာဖြင့် 'ဒါငါ့ချစ်သူဖျော် ထားတာ'တဲ့။ တော်ပါသေးရဲ့ သဘောထားပွင့်လင်းပြီး အမြင်ကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းသဘာဝမှာကျင်လည် နေကြသူများမို့ ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကို မထူးဆန်းသယောင်လက်ခံပျော်ရွှင်ပေးကြပါတယ်။
မြို့ထဲသွားလာရာ ဈေးဝယ်ရာ ပိုင်အိုနီးယားကလပ်တွေသွားတာ စသဖြင့်သူကျင်လည်လှုပ်ရှားရာတိုင်းမှာ ကျွန်တော် မပါမဖြစ်ပါ။ ခပ်ချောချော နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ မြန်မာချွတ်တားလေးက ကပ်ပါနေတာဆိုတော့ လူတွေက တစ်မျိုးတစ်မည် စူးစမ်း မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ကြည့်နေသလားပဲ။ ကျေတော့ ကျေနပ်မိပါတယ်...ကျွန်တော် ဟာသူ့အတွက် အပျော်အဖော်အဆင့်ထက်ပိုပြီး နေရာ ပေးခံရတယ်၊ အချစ်ခံရတယ်လို့ပေါ့။
ကျွန်တော်သူ့ကိုရင်ခုန်မိသလား....နှစ်သက်မိတာတော့အမှန်ပါ။ ပညာအရမ်းတော်တယ် ဒါဟာဦးစားပေးအချက်ဖြစ်မိ တယ်ထင်ရဲ့၊ သူတစ်ပါးနိုင်ငံမှာ လာအလုပ်လုပ်တယ် လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတတ်တယ် ဒါဟာ ဒုတိယ အချက်၊ ဦးစားပေးတယ် တကယ့်ကို ချစ်ခင်လှိုက်လှဲစွာဖြင့် သူ့ မေတ္တာတွေကို ရယူစေတယ် ဒါဟာ တတိယ အချက်၊ နောက်ဆုံးသူဟာ နှစ်လိုဖွယ်အပြုံးနဲ့ ရုပ်ရည်ချောမော သူဖြစ်နေ တယ် အဲဒါဟာလည်း...။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ရာသီစက်ဝန်းလည်ပတ်နေသလို လောကသဘာဝ အလုပ်သဘာဝတွေအတိုင်း သူ့အလုပ်ဟာ စာချုပ်သက်တမ်း စေ့လာသလို ကျွန်တော်သိနေတာက ကျွန်တော်တို့ ချစ်စာချုပ်သက်တမ်းလည်း သက်တမ်းစေ့ဖို့နီးစပ်လာပြီပေါ့။ အဲဒီအ ကြောင်းလေးကို သိဖူးမြင်ဖူး နှင်းစက်တွေနှင့်ပြန်လည်ထိတွေ့ ရတဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးမှာ ကျွန်တော်တိတိကျကျ သိခဲ့ရတာ ကြောင့် ရင်ထဲ အသည်းထဲ ပူလောင် တဲ့ချောကလက်ရည်တွေ လောင်းထည့်လိုက်သလို ခံစားရတာများ အခုပဲ နွေရာသီ ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ။
လေထဲမှာလွင့်မျောနေတဲ့တိမ်တိုက်တစ်ခု ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မျောချင်ရာမျော ဖမ်းဆုပ်ထားမယ့်သူမရှိ လေအလာ အတိုင်းမျော ရသူပေါ့။လေဆိပ်ကပြန်လာတဲ့လမ်းတစ်လျှောက် ကျွန်တော်...ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းဆိုတာ တွေးမိတာသာမဟုတ် လက်တွေ့ ခံစားရပြီပေါ့လေ။
'ဒီဇင်ဘာရယ် အလွမ်းမိုးစက်တွေ ငါ့ရင်ထဲသည်းစေတယ်'တဲ့ သီချင်းသံလေးက ဆောင်းဘောက်စ်က တစ်ဆင့်နားထဲဝင် ရောက်လာ ရပေါ့။ လူတကာအားကျတဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်ဇာတ်လမ်း ဆောင်းနှင်းစက်တွေနဲ့ အတူခေါင်မိုးပေါ် တဖျောက် ဖျောက်....။
တိတ်ဆိတ်နေသောအခန်းအတွင်း ကျွန်တော်၏ အသက်ရှူ သံမှလွဲ၍ ဘာသံကိုမှမကြားရ။ပွင့်နေသော ကုတင်ဘေးမှ ပြူတင်းပေါက်က လေတဟူးဟူးဝင်နေသည်။ ကျွန်တော်က နံရံပေါ်မှ မီးခလုတ်များကို လက်ဖြင့်စမ်းရင်း ဖွင့်လိုက်၏။ ထိုစဉ် ကျွန်တော်၏ ဘယ်ဘက် အင်္ကျီအိပ်ကပ်အောက်မှာ နှလုံးခုန်သံက တဒုတ်ဒုတ်ဖြင့် လှုပ်ခါသွားသည်ကို သတိ ပြုမိလိုက်သည်။
ရေချိုးခန်းနံရံပေါ်က မှန်ချပ်ရှိရာဆီ ခပ်သွက်သွက် သွားပြီး ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ ပန်းသွေးရောင် ထနေပြီး မျက်ဝန်း များဟာ မအေးစက်တော့တာကို အံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်လိုက်ရသည်။
တစ်ယောက်တည်းတိတ်ဆိတ်နေတတ်သည့် ကျွန်တော့် အတွက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က 'ခင်မင်ဖို့ကောင်းသည့် အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်ရှိတယ် သူနဲ့စကားပြောကြည့်'ဆိုကာ ဂျီမေးလ်အကောင့်တစ်ခုကိုပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ကျွန် တော့်ငြိမ်သက်နှလုံးသားဟာ တဆတ်ဆတ်ပြန်လည်ခုန်လာတာ သိပ် တော့မထူးဆန်းဘူးလို့ပြောရင်ရမလားဘဲ။
သူဟာ ပြင်သစ် ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းလုပ်ငန်းခွင်မှာ ပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရည်ကမြန်မာမဆန်ဘဲ အနောက်တိုင်းရုပ်ပေါက်နေသည်။ စတင်တွေ့ဆုံမိတဲ့နေ့တန်းကဆို လူကြားထဲ ထင်းနေသည့်သူ့ ရုပ်ရည်နဲ့ အရပ်အမြင့်ကြောင့် ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့မလား လို့ သံသယ၀င်မိသေးသည်။
'ဒါအမှန်ဘဲ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ကာလာမသုတ်ထဲမှာ ဟောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ညီသိတယ်မလား'
ကျွန်တော့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံဆုံရတဲ့အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ပြောဆိုတိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့အခါ ရှင်းလင်းသွား အောင် အဓိပ္ပာယ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ရှင်းပြနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာ သာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အဘိဓမ္မာစာမေးပွဲ ကိုလည်း ဖြေဆို အောင်မြင်ထားသူ ဆိုတော့ အမြင်မကြည်တာတွေကို လင်းသွားအောင်ထွန်းညှိပေးနိုင်သူပါ။
တစ်စစနဲ့ ကျွန်တော်သူ့ကိုတွယ်ညှိလာတာများ မယုံနိုင်စရာပါ။ သူနဲ့ခွဲရမှာကြောက်လို့ သူ့ရင်ခွင်ထဲ သည်းသည်းလှုပ်ငိုရှိုက်မိရတာ သုံးကြိမ်လောက်ရှိမလားဘဲ။ အစ်ကိုလို အဖေလို ပြီးတော့ချစ်သူတစ်ယောက်လို အရာရာ ပြည့်စုံ အောင် မေတ္တာ ဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့ 'အစ်ကို' ပါ။
လောကဆိုတာဘာတွေများလည်း အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့လိုလူမျိုးတွေမှာ အချစ်ဆိုတာ တကယ်အသုံးဝင် ရဲ့လား။ 'ရင်ထဲစူး စူးနစ်နစ် ခံစားမိတာပဲဖြစ်ဖြစ် မခံစားရတာဘဲဖြစ်ဖြစ် ယုံကြည်နိုင်တယ်လို့ မယူဆကြဘူးလား' ဆိုတာတွေးမိရပါပြီ။ လက်ထပ် လို့လည်းမရ၊ ကိုယ့်ကိုသာချစ်ပါလို့ ပြောဆိုပိုင်ခွင့် လည်း မရှိ...အို.....ဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိ အရိပ်နဲ့အငွေ့ကိုသာ ဖမ်းဆုပ်တွယ်ငြိ နေမိသူ သက်သက်ပါဆိုတာ ကျွန်တော် ဟော ဒီလိုဆောင်းတွင်းညချမ်းတစ်ခုမှာ သိလိုက်ရ ပြန်ပါသည်။
'နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ညီ မလေးရှားကပြန်လာမယ်၊ ကိုယ်နဲ့အတူနေမယ်ကွ၊ သူအပြင်သွားတဲ့ရက်တွေမှာ တွေ့ရအောင်နော်'
မီးကိုအမှောင်ချ အေးစက်နေတဲ့အခန်းတွင်းမှာ ကျွန်တော်လှဲ အိပ်နေမိသည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်မှု များစွာဖြင့် ချာချာ လည်နေရသည့်အဖြစ်က ဘယ်သူမပြုမိမိမှုသာလို့ ပြော ရင်ရသလို အချစ်ကိုငံ့လင့်မိသည့် မိမိ နှလုံးသားကိုလည်း သော့ခတ်မထား ဖြစ်သည့်အကြောင်းများကြောင့်လို့ ဆိုရမလို ပင်ဖြစ်ပါသည်။
သတိရခြင်းများစွာ ပြီးတော့ တမ်းတမိတဲ့ အနမ်းများစွာကြောင့် မတွေ့ရသည့်ရက်တွေများမှာကျွန်တော် တစ်ယောက် တည်း ဖြစ်နေမိ သည်။ အလုပ်များမှာစိတ်မပါလက်မပါဖြစ် နေမိတော့ သည်။ ဖုန်းဆက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး ဖုန်းခွက်ကို ကောက်ကိုင် နံပါတ်တွေကို တစ်ခု ချင်းနှိပ်ကာခေါ်မိရစဉ်မှာတော့
အွန်လိုင်းသူငယ်ချင်းများစွာထဲမှ တွေ့ဆုံဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်းလေးဖြစ်သည်။ နယ်ကတက်လာသည့် သူချင်းအတူတူ သူ့ကို ကျွန်တော်သဘောအတော်ကျမိရတာ သူ့စိတ်နေသဘောထား၊ အလုပ်အပေါ်အာရုံ ထားမှုနှင့် ပညာတော်သူ ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်ဖြစ်မည်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူသည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသူ တစ်ဦး။
အို....လူများစွာနှင့် အံဝင်ခွင်ကျစကားပြောတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်အောင် သူကပြသပေးခဲ့သည်။ သင်ကြားပေးသည်မဟုတ် သူလုပ်ဆောင်နေထိုင်ပြခြင်းတွေမှ ကျွန်တော် ရယူ မိခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သူ့အလုပ်မှ သူငယ်ချင်းတွေကို သူအတော်အလေးပေးသလို အတော်ပင်ခင်တွယ်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အလုပ်ကနား ချိန်မှာ တရုတ်တန်း ကိုသွား စားကြသောက်ကြ၊ ကန်တော်ကြီးမျှော်စင် ကျွန်းကိုသွား လွတ်လွတ်လပ်လပ်။ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက် ဟာ ဘာဆိုတာ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေက သိနေသလို အထင် သေးဟန်လည်းမပေါ်။ ဟုတ်တယ်လေ ကျွန်တော်တို့ဟာ ချစ်သူတွေပဲ။
ရယ်ရယ်မောမောနှင့် အမြဲတစေဖော်ရွေသူ၊ဘယ်သူ့ကိုမေး မေးသူဟာ တော်တော်ခင်မင်ဖို့ကောင်းသူ တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါသည်။ အော်...... ကျွန်တော်ကြောက်လန့်မိခဲ့သည့်တွယ်ငြိရမှုသည် နောက်တစ်ခါပျက်ပြယ် ရပြန်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ဟင့်အင်....ငါချစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ငြင်းဆန်ရမည်ဆိုတော့လည်း မဟုတ်ပြန်သေးပါ။ သူ့အရည်အချင်းကို အားကျသည်လား မဟုတ် သေးပါ။ ဘာကိုစွဲလမ်းမိသည် လည်း...အထိ အတွေ့လား မဟုတ်သေးပြန်ပါဘူး။
အချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့ ဒီအချိန်မေးလာလျှင် အပေးအယူမျှတမှု လည်းမဟုတ်၊ ရယူမှုပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမဟုတ် 'ပေးဆပ်မှု' သက် သက် သာဖြစ်နေရသည်ပဲလေ။ ဘာလဲ....ဘာလဲ.....ဘာလဲ ကျွန်တော့်အတွက် အချစ်ဆိုတာ.။
'တစ်ယောက်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်နေတယ်ဆိုရင်မင်းအရူးပဲ၊ ငါတို့က သဘာဝကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့အချစ်ဆိုတာ မင်း သတိထားဦးလေ'
ရွှေတိဂုံဘုရားကိုရောက်တိုင်း ရွှေသင်္ကန်းအတူကပ်ခဲ့တာ ကို သတိရမိသည်။ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ကို တစ်ပတ် ပတ်လမ်း လျှောက် ခဲ့ကြ သည်ကို တမ်းတသည်။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ဖက်တွယ်တတ်သောလက်တစ်စုံနဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ကိုတွယ် တာမိသည်။
သဘာဝမဟုတ်ဘူးတဲ့လား...ကျွန်တော်သည် သဘာဝမကျ တဲ့ဘ၀တစ်ခုကိုဖက်တွယ်ထားသည်ဟု ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆမိသလို ဘယ်တုန်းကမှလည်း အားငယ်စိတ်ဝင်ခဲ့သူ မဟုတ် ပြန်ပါ။ သဘာဝထဲက သဘာဝလူသားတစ်ဦး အဖြစ်သာ ခံစား ချစ်ခင်နေထိုင်ခဲ့ သည်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ လူ့လောကသည် တစ်ဦးတည်း နေထိုင်သည်မဟုတ်သလို စိတ်သ ဘောထားသည်လည်း တိုက်ဆိုင်သည်ဆိုတာ ထပ်တူမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါ။
တို့တွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ဆက်လက်ခင်မင်ကြတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ။ အမုန်းနဲ့လမ်းခွဲခြင်းမျိုး မလိုလားဘူး။ ပြီးတော့ မင်းနဲ့ ခွဲသွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်ပါဘူး ကိုယ့်အတွက်။ ဒီတော့ 'သူငယ်ချင်း'ဆိုတာလေးအဖြစ် ပတ်သက်ခွင့်ရ တာကိုပဲ ကျေနပ်ရမည် .....ကျေနပ်ပါသည်။
အဆောင်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက် စံပယ်ခြုံက စံပယ်လေးတွေအရမ်းမွှေးသည်ပဲ.......
ရွှေတိဂုံဘုရားက အင်္ဂါနံထောင့်မှာ ကိုယ်စံပယ် ပန်းလှူ နေတယ်ကွာ သိလား....။
'အစ်ကိုအကြံပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း ကျွန်တော့်ညီကိုဆုံးမလိုက်တယ်၊ အစ်ကိုကျွန်တော့်ဆရာကြီးပါပဲ၊ လေးစားချစ်ခင်သွား မိပြီဗျ'
'ညီနဲ့ခင်မင်ချင်လို့ပါ၊ ကိုယ်မြန်မာပြည်ပြန်လာရင် ကြိုမှာလားကွ'
'အစ်ကိုကတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော် အစ်ကိုသာ ကျွန်တော့်ချစ်သူအဖြစ်ရှိရင် ကျွန်တော့်အတွက် ကံအကောင်း ဆုံးဆိုတာ ဖြစ်လာမှာပဲ'
'မင်းမှာ ရင်ခုန်သံတွေတော်တော်ပေါတာပဲနော်၊ပြီးတော့ ပျော် စရာကြီး ငါ့မှာချစ်သူတစ်ယောက်မှမရှိဘူး အထီးကျန် သလိုပဲ၊ မင်းက တော့ အထီးကျန်တယ်ဆိုတာ ဘာမှန်းသိမှာမဟုတ် ပါဘူး။'
အထီးကျန်ဆိုတာ တစ်ယောက်တည်းနေထိုင်ရမှုကိုဆိုလိုသလား။ ကျွန်တော်...ကျွန်တော်ဟာ အမှန်တကယ်တော့ အထီးကျန်သူပါ။
စိတ်ထဲကမပါပဲ ပြုံးရယ်တတ်ပါပြီ။ ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမပါဘဲ ရင်ခုန်ပြတတ်ပါပြီ။ သဘာဝကျကျ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ပေါင်း သင်းဆက်ဆံ တတ်ပါပြီ။
ကြုံဆုံရတဲ့လောကကြီးကြောင့်ရော အတွေ့အကြုံအရပါ မိမိမဟုတ်သည့် မိမိဆိုသည့် သဏ္ဌာန်တစ်ခုကို ဖန်းဆင်း လိုက်ပါ၏။
စိုစွတ်သွားသည့်လက်ခုံပေါ်ကို ဖျောက်ကနဲကျသည့် ရေတစ် ပေါက်သည် နှင်းမိုးစက်မဟုတ်ခဲ့။ ကျွန်တော့်မျက်ဝန်းမှ ကြွေ သည့် မျက်ရည်တစ်ပွင့်သာဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ကိုယ်ရေ.....ဘာကိုမှန်းမသိ လွမ်းဆွတ်နေသလို အထီး ကျန်နေသည်..အထီးကျန်ဆန်နေရသည်ပဲ အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ။
ဇာနည် @ Alex Aung
စာကြွင်း။ ။ ဘာရယ်မဟုတ် ဒီဇင်ဘာလတွေရောက်တိုင်း ဒီစာလေးကိုပြန်ပြန်ဖတ်မိပြီး ပြန်တင်မိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခံစားချက် အစစ်အမှန်များဖြစ်ပြီး အဲ့သည့်စာရေးချိန်က မိနစ်၂၅လောက်သာကြာခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်ပြန်ရေးခိုင်းရင် ရေးတတ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
Posted by Alex Aung at 5:47 AM No comments: